တချို့အမှားတွေက ပြန်ပြင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး - ONE DAILY MEDIA
အမှားတွေကို ပြန်ပြင်ဖို့ဘယ်တော့မှ နောက်မကျတတ်ဘူးတဲ့
ဒါပေမယ့် တချို့အမှားတွေကကျတော့ အချိန် အများကြီးနောက်ကျပြီမှပဲ သိလာရတာမျိုးလေ ။ ဥပမာ သူကျွန်မကို သိပ်ချစ်တာလို့တစ်ထစ်ချကြီးယုံကြည်ပြီးဇွတ်တိုးခဲ့ပြီးမှ သူမချစ်ပါလားဆိုတဲ့အမှန်တရားကို သိလာရတာမျိုးပေါ့
အဲ့ဒီအချိန် ရှေ့ဆက်တိုးရအခက် နောက်ပြန်ဆုတ်ရအခက်နဲ့ ကျွန်မတို့မှာ ကျင်းထဲကျပ်ထဲ ရောက်နေတတ်တယ် . ဒါကိုမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာက အမှန်ကိုလမ်းကူမပြပဲ အမှားကို ထပ်ခါထပ်ခါထိုးနှက်တတ်ကြသေးတာ နောင်တတွေရနေတဲ့သူကို သတ်သေချင်သွားအောင်ပါ့ …
အမှားတိုင်းဟာ ပြန်ပြင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာတကယ်တော့မှားတယ် ။ တချို့အမှားတွေဟာ တစ်ခါလေးတောင် မှားခွင့်မရှိဘူး ပြီးတော့ အမှားတွေဟာ နောင်တနဲ့ နာကျင်စရာတွေပဲ သယ်လာတတ်တယ် သင်ခန်းစာတွေကတော့ ကိုယ်လုံလုံလောက်လောက် နာကျင်ပြီးသွားမှပဲ ရလာတာမျိုးပေါ့ ။
လွယ်လွယ်ကူကူလေး ယုံတတ်တဲ့စိတ်တွေဟာ အမှားတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူလေး ခွင့်ပြုလေးလိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်လာတတ်တာလေ … ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်လိုအမှားမျိုးကိုမှ မရှိစေချင်ဘူး ။ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို သိရဖို့ အချိန်တွေအများကြီးလိုတယ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ ကွာကျလာဖို့ကတော့ ဒုက္ခတွေလိုပါတယ် ။ ဖြစ်နိုရင် … ထပ်ပြီး မမှားစေချင်တော့ဘူး ။
အမွားေတြကိုု ျပန္ျပင္ဖို ့ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မက်တတ္ဘူးတဲ့ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႔အမွားေတြကက်ေတာ့ အခ်ိန္ အမ်ားၾကီးေနာက္က်ျပီမွပဲ သိလာရတာမ်ိဳးေလ ။ ဥပမာ သူကြ်န္မကို သိပ္ခ်စ္တာလို ့တစ္ထစ္ခ်ၾကီးယံုၾကည္ျပီးဇြတ္တိုးခဲ့ျပီးမွ သူမခ်စ္ပါလားဆိုတဲ့အမွန္တရားကို သိလာရတာမ်ိဳးေပါ့
အဲ့ဒီအခ်ိန္ ေရွ႕ဆက္တိုးရအခက္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရအခက္နဲ႔ ကြ်န္မတို့မွာ က်င္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ေနတတ္တယ္ . ဒါကိုုမွ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုတာက အမွန္ကိုလမ္းကူမျပပဲ အမွားကို ထပ္ခါထပ္ခါထိုးနွက္တတ္ၾကေသးတာ ေနာင္တေတြရေနတဲ့သူကို သတ္ေသခ်င္သြားေအာင္ပါ့ …
အမွားတိုင္းဟာ ျပန္ျပင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့စကားဟာတကယ္ေတာ့မွားတယ္ ။ တခ်ိဳ႔အမွားေတြဟာ တစ္ခါေလးေတာင္ မွားခြင့္မရွိဘူး ျပီးေတာ့ အမွားေတြဟာ ေနာင္တနဲ႔ နာက်င္စရာေတြပဲ သယ္လာတတ္တယ္ သင္ခန္းစာေတြကေတာ့ ကိုယ္လံုလံုေလာက္ေလာက္ နာက်င္ျပီးသြားမွပဲ ရလာတာမ်ိဳးေပါ့ ။
လြယ္လြယ္ကူကူေလး ယံုတတ္တဲ့စိတ္ေတြဟာ အမွားေတြကိို လြယ္လြယ္ကူကူေလး ခြင့္ျပဳေလးလိုက္သလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာတတ္တာေလ … ျဖစ္နိုုင္ရင္ ဘယ္လိုအမွားမ်ိဳးကိုမွ မရွိေစခ်င္ဘူး ။ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို သိရဖို့ အခ်ိန္ေတြအမ်ားၾကီးလုိတယ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႔ မ်က္ႏွာဖံုးေတြ ကြာက်လာဖို့ကေတာ့ ဒုကၡေတြလုိပါတယ္ ။ ျဖစ္နို္ရင္ … ထပ္ျပီး မမွားေစခ်င္ေတာ့ဘူး ။